The Tech Effect: Martech သည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနေခြင်းဖြစ်သည် Martech Zone
များစွာသောရွေးချယ်စရာပလက်ဖောင်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုခင်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်။ Gartner ၏ Magic Quadrants သို့မဟုတ် Forrester's Wave အစီရင်ခံစာများထက်မကကြည့်ပါ။ ယနေ့စျေးကွက်တွင်ရနိုင်သောနည်းပညာပမာဏသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့များသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်သူတို့၏အချိန်ကုန်မှုကိုမကြာခဏသုံးစွဲကြပြီး၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသို့သွားသင့်သည့်ငွေများကိုအသေးအဖွဲ - နှင့်များသောအားဖြင့်လက်ဖြင့် - စစ်ဆင်ရေးများတွင်သုံးစွဲနေကြသည်။
လတ်တလောမှာတော့ လေ့လာချက်, Sirkin သုတေသနမှ Martech ကိုတားဆီးနေသောအရာကိုနားလည်နိုင်ရန်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိစျေးကွက် ၄၀၀ ကျော်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းရိုးရှင်းစွာမေး
သင်၏လက်ရှိ Martech ဖြေရှင်းချက်များသည်မဟာဗျူဟာမြောက်ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုလား။
အံ့သြစရာ စျေးကွက်၏ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ရှိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများသည်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အောက်ပါတို့ကိုကိုးကားခဲ့သည်။
၆၈% ကသူတို့၏အစွမ်းသည်အရင်းအမြစ်များ (လူများနှင့်ဘတ်ဂျက်) ကိုမဟာဗျူဟာနှင့်အညီချိန်ညှိရန်မတတ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
၅၃% ကသူတို့၏အစပ်သည်စျေးကွက် (စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၊ အကြောင်းအရာနှင့်ဖန်တီးမှု) ကိုအဖွဲ့များ၊ နည်းပညာနှင့်ထိရောက်စွာကွပ်ကဲရန်လမ်းကြောင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခက်ခဲစေသည်ဟုဆိုသည်
၂၃% ကသာသူတို့ရဲ့ stack သည် tools များအကြား interoperability ကိုမောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်
၃၄% ကသာသူတို့ရဲ့အစွမ်းကအကြောင်းအရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းဖန်တီးနိုင်၊ အုပ်ချုပ်နိုင်၊
ထို့ကြောင့်လက်ရှိ Martech ဖြေရှင်းချက်များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအဘယ်ကြောင့်မဖြည့်ဆည်းပေးသနည်း။
အဖြစ်မှန်မှာ Martech ကိရိယာများသည်အဓိကအားဖြင့်အဓိကကျသည့်ဖြေရှင်းနည်းများအဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် - မကြာခဏဆိုသလိုနောက်ဆုံးပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းနှင့်အပြိုင်၊ “ အပတ်စဉ်ရုပ်သံလိုင်း” နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနာကျင်မှု၊ စိန်ခေါ်မှုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ ဒီကိရိယာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ၊ လက်ဝှေ့သမား စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများအား RFPs များကိုထုတ်ပေးခြင်း၊ စျေးသည်များအားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းများကိုဝယ်ယူခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာများ -
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်လိုအပ်သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။
အိုကေ၊ ငါတို့တီထွင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာကိုမျှဝြေခင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုထားရှိရန်
ကံမကောင်းစွာဖြင့်တကယ့်လက်တွေ့အသုံးချဆော့ဝဲများတွင်ထိုကိရိယာများသည်အလွန်အမင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အထူးကိရိယာများကိုအထူးအဖွဲ့များအတွက်ဝယ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်များသည်ပိုကြီးမားသော၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ချန်ပီယံများနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲသူများရှိပြီးအထူးသဖြင့်ထိုကိရိယာ (နှင့်ထိုကိရိယာသာ) အတွက်ဒီဇိုင်းမတူသောလုပ်ငန်းအသွားအလာများရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေစုဆောင်းကြတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာသည့်အချက်မှာသိသာထင်ရှားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှုပ်ထွေးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemနာဖြစ်သည် (သင်၏ CFO / CMO ၏ software overhead ၏ TCO တွင်ကြီးမားသောတိုးများလာခြင်းကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ) ။ တိုတိုပြောရရင်: စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်၎င်းတို့၏အဖွဲ့ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းရန်အားပေးသည့်ဗဟိုချက်ဖြေရှင်းမှုဖြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ.
စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုစတင်ခြင်းသည်ကျောင်းဟောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်။ ဆုတောင်းနိုင်သည့်အချိန်များဖြစ်သည်။ သူတို့၏စနစ်အားလုံးသည်မှော်ဆန်စွာတပြေးညီဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ အမွေအနှစ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည် box ကို check လုပ်ပါ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အပြည့်အဝချမှတ်နှင့် tool မှတန်ဖိုးကိုရရှိသည်ဖို့သာ။
စီမံကိန်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းအပါအ ၀ င်အဖွဲ့များသည်စျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သောဘက်စုံအမြင်ကိုယူရန်နှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့အထောက်အကူပြုမည့်အဖြေများကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ orchestration။ ဘယ်ကိရိယာတွေသုံးနေသလဲ။ သူတို့ဘယ်လိုအချင်းချင်းစကားပြောကြတာလဲ အချက်အလက်များ၏မြင်သာမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များ၏တိုင်းတာခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်ကူညီရန်သူတို့ကူညီပေးပါသလား။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်လေ့လာမှုတွင်ဖြေဆိုသူ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းက martech သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ခန့်မှန်း Analytics မှ, AI / စက်သင်ယူ, Dynamic Creative Optimization နှင့် ... စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသံစုံတီးဝိုင်း.
ယေဘူယျစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်အခြားအချက်များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်မတူဘဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများသည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။
Marketing orchestration ဆိုသည်မှာလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည့်မဟာဗျူဟာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။
ထိရောက်စွာ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး orchestration software ကိုဖြစ်လာသည် နေအိမ် or ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် (ဆိုလိုသည်မှာအမှန်တရားရင်းမြစ်) စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များအတွက် - အလုပ်အားလုံးလုပ်သောနေရာ။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ၎င်းသည်မဟုတ်မမှန်ကွဲပြားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအကြားဆက်သွယ်မှုတစ်သျှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် - မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း၏ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကိုဖြတ်သန်းခြင်းအားကူညီသည်။
ခေတ်သစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည်ခေတ်မီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာလိုအပ်သည်။ ဤမတူညီသောကိရိယာအားလုံး၏အကောင်းဆုံးကိုတစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့စုစည်းပေးသောဆော့ဖ်ဝဲ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနည်းပညာအစုနှင့်ပေါင်းစပ်) သည်ဖြစ်စဉ်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြင်သာမှုနှင့်ပိုမိုသောထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ပါဝင်မှုနှင့်အချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်။ နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တိုင်းတာခြင်း။
ကြိုဆိုပါတယ်။ Marketing ရဲ့သံစုံတီးဝိုင်းပလက်ဖောင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက်ခေတ်မီ၊ ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားသော module များပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များကိုမဟာဗျူဟာကျစွာစီစဉ်ခြင်းနှင့် align လုပ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်တံခါးပေါက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ပေါ်လာစေခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းမြစ်များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်အုပ်ချုပ်မှုအပြင်သင်၏လုပ်ငန်းကိုတိုင်းတာရန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုတို့ကိုမြင်နိုင်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်တိုင်းအတွက်ဗျူဟာမြောက်ပေါင်းစပ်မှုများကိုကမ်းလှမ်းရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်မူဘောင်တစ်ခုသည်ခိုင်မာသည့် API နှင့်အစွမ်းထက်သောပေါင်းစပ်မှုစျေးကွက်ဖြင့်ရာပေါင်းများစွာသောကုဒ်နံပါတ်မရှိသောဆက်သွယ်မှုများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ conductor လိုမျိုးတူရိယာအမျိုးမျိုးကိုတီးမှုတ်နေသောဂီတသမားများစွာကိုစီစဉ်ရန်အတွက်တုတ်တစ်ချောင်းလိုလိုပဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမာ့စထရိုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုကြိုးပမ်းရန်အတွက်သူတို့၏ကိရိယာများအားလုံးတွင်မြင်နိုင်စွမ်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည်။
ကြိုဆိုခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ တစ် ဦး ကကြိုဆိုသရုပ်ပြတောင်းဆို